Kedu ihe mbụ ị na-eme mgbe ị banyere n’ọfịs ahụ? Ị lelee ozi ịntanetị gị, nri? N’agbanyeghị na ọ bụ otu n’ime ihe ndị Intaneti kachasị ọhụrụ, email e-pasts ka bụ otu ngwá ọrụ anyị na-eji kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ ụzọ kachasị ike ma dị irè iji zụọ ahịa ndị ahịa gị.
N’ezie, dị ka ọtụtụ n’ime ndị ahịa ahịa kacha elu, email e-pasts na-aga n’ihu pārspēj mgbasa ozi mgbasa ozi na ọwa dị iche iche.
Ọ na-agbanwekwa. E kwuwerị, ndị debanyere aha gị bụ ndị gosipụtara mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. N’ọnwa gara aga, KeriLynn dere banyere otu esi eme me ka ka ego jiri aka na listi email. Taa, aga m aga n’ihu, na-akọwa ụzọ isi bulie ndị na-edebanye aha gị ụgwọ. Ndị ọzọ debanjere aha ha, ndị ọzọ na-atụgharị, ndị ọzọ ahịa.
Man nekad nav tik vienalga … "Ee, duh".
Ndekọ ozi e-pasts gịdị mma dịka ọdịnaya ị na-emepụta. Ị gaghị ekwenye ndị debanyere aha iji nyefee adreesị ozi-e ha n’enweghị ịfụ ha na nnukwu ọdịnaya. Ma ị gaghị edebe ha na listi gị ma ọ bụrụ na ịnweghị iwepụta ozi gị jupụtara na ihe bara uru. Nzọụkwụ otu na-eweta ihe ndị na-ama ama, ime ihe, na-akụzi, ma na-agwa ndị ọbịa gị. Mgbe ahụ, mgbe ị na-arịọ maka email ha, ha ga-enwe obi ụtọ ime otú ahụ.
Ị maara okwu a ‘ọ dị ntakịrị karịa’? N’ihe banyere ụdị ndebanye aha email, chefuo ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nnukwu idei mmiri nke ndị debanyere aha, ị ga-ebuwanye ibu ọnụ ọgụgụ gị. N’ezie, ewerebo akara ịchọta – ị chọghị imejọ ndị ọbịa gị.
Ihe ha na-ekpo ekpuchi bụ “HelloBar” – ụdị mpempe akwụkwọ nke na-ekpuchi na elu nke ebe nrụọrụ weebụ ha – na “Slideup” – kas ir nteye nke gosipụtara mgbe onye ọbịa bịara karịa 60% ala a. Ndị ọzọ nhọrọ ndị mmadụ debanyere aka, otú ahụ ka o yikarịrị ka ha ga-eme ya.
Ugbu a, ị na-emechi ihe gbasara ya na ihe mkpali. Ịbanye maka akwụkwọ akụkọ bụ mgbanwe. Ndị ọbịa gị chọrọ ihe na nloghachi. Jā, ja ne, tu esi na-apịghị iguzogide! Ụfọdụ echiche ndị a nwalere nke ọma gụnyere: e-grāmata, akwụkwme edemede na data na nchọpụta, ikpe na-enweghị n’efu, akwụkwọ ma ọ bụ broshuọ. Otú ọ dị, e nwere otu isi magnet nke na-ebugharị elu ma dị elu: ọdịnaya nweta nkwalite ”. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa ma dị mkpa nke na-agbakwụnye uru nke blọọgụ gị dị.
N’ịbụ onye a kwadoro dịka ‘ego zuru oke’, nkwalite ọdịnaya bụ nke a kapịrị ọnụ, nke na-enye ndị na-agụ akwụkwọ ngwa ngwa. Ndepta ndebanye na-arụ ọrụ nke ọma, ma jiri echiche gị, na mepụta ihe dk mkpa na nke a kapịrị ọnụ na ọdịnaya gị. Mēs neesam sasnieguši nevienu mirkli, kad kachasị ewu ewu gị.
Nkpọkọta gị nwere ike ime ma ọ bụ mebie mgbasa ozi ndenye aha gị. Nke a bụ bọtịnụ ‘denye aha’ gị. Ọ bụ nzọụkwụ ikpeazụ. Ị ghaghị ime ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee mmetụta ịmanye ya na ya. Enwere hehe abe ebe: agba, ntinye, na iṅomi. N’ihi na agba, elu, dzeltenumi, na apelsīni na-arụ ọrụ nke ọma. Ha na-eji obi ike, na-adọrọ anya, ma dọta uche gị. We vēlreiz ikega otu nzọụkwụ n’ihu ma mee ka ya na mmekọrịta. Nke a – ma ọ bụ akwụkwọ ochie – CTA bụ ezigbo ihe nlereanya. Ọ na-agbanwe vietne na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụrụ na e kpuchiri ya – na-eme ka onye ọrụ ahụ gaa!
Banyere akwụkwọ ahụ, mee ka ọ dị mkpụmkpụ, nkọ, na isi. Ụfọdụ ndị ahịa na achọpụtala na iji ‘akpa’ mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma Ebe a. GIF d’n’elu bhe ir ụzọ dị mkpa: "Nye m akụkọ efu ugbu a!" Karna "ibudata akụkọ bezmaksas". O, mēs vēl nekad neesam sasnieguši okwu na ndị ọbịa gị.
Ha na-echegbu wewe ha na ha abanyelarị na ọtụtụ ederede email. Ha na-atụ egwu na ị vēl nekad neesam tikpat iziga, ha spam na akwụkwọ ozi. Ọ bụrụ na ha bụ onye ọbịa ọhụrụ, ha na-echegbu onwe ha n’ihi na ha anụtụbeghị banyere gị. Igbu oge ahụ adịghị mfe, mana atbilde bija tāda pati kā jūs. Malīta vietne n’ịgwa ha kpọmkwem ihe ha ga-enweta mgbe ha debara aha ha. Buru uzo na imeghe. Ụgha ọzọ na-eji ‘ihe akaebe mmadụ’ gosi ha na ndị ọzọ na-atụkwasị gị obi. Nke a dhe mfe nke jikọtara usoro abụọ a:
E nwere ihe akaebe mmadụ na n’elu (‘soro 31,012 ndị ọzọ dị egwu!’) Mgbe ahụ, e nwere ndepụta ntụgharị nke kpọmkwem ihe ị nwetara site na ịdebanye aha. Oņeņ ọzọ na-atụ egwu egwu na-echetara ndị debanyere aha gị na ị na-akpọkwa spam kwa, nakwa na ị gaghị eso onye ọ bụla ọzọ kerịta nkọwa ha.
Es esmu mgbochi ikpeazụ iji debanye aha bụ ụdị ntinye akwụkwọ dị mgbagwoju anya na ogologo. Ụdị ihe odide gị adịghị mkpa ịjụ maka aha nwa agbọghọ nne gị na-agụ. Ọbụna ị chọghị ebe ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ. Mee ka ọ dị mfe. Mee ya ngwa ngwa. Ekwela ka ha nwee ohere igbanwe obi ha.
Maka weebụsaịtị ụfọdụ, ịrịọ maka aha mbụ bụ echiche bara uru. Ọ pụtara na ị nwere ike ịza ndị na-agụ akwụkwọ gị n’onwe gị na email n’onwe ya – nke na-emekarị ka mma ọnụego. Ma ị dịghị ihe ọzọ achọrọ! Ọ bụghị naanị na ọ na-etinye oge na usoro ahụ, ọ nudien ike ịmalite ịnwe mkparịta ụka, nke nwere ike iweghachị ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-eji nzuzo ha eg. Ọnụ ọzọ na-eme ka ndị ọbịa gị ghara ịbanye gaa na ibe ọzọ iji banye. O kwesịrị ịdị mfe dị ka:
Emere ya n’ụzọ ziri ezi, ị ga-enwe ike ikwenye ma gbanwee na nanị sekọnd ole na ole. Ọ bụ ihe niile na-ewere ozi email nke ndị na-ege gị ntị ka ha na-enwe obi ụtọ maka ọdịnaya gị – tupu ha enwe ohere ịgbanwe obi ha. Cheta na, ndị ọzọ ị debanyere aha, ị ga-enwekwu ohere ịnweta ego. Ego dị na ndepụta! Olee aghụghọ na usoro ịchọtara dị irè maka ịba ụba nọmba gị?
Kedu ihe mbụ ị na-eme mgbe ị banyere n’ọfịs ahụ? lee lelee ozi ịntanetị
Kedu ihe mbụ ị na-eme mgbe ị banyere n’ọfịs ahụ? El lelee ozi ịntanetị
Kedu no mbụ-na-eme mgbe ị banyere n’ọfịs ahụ? El lelee ozi tanntanetị gị, nri?